Kooxda Barcelona oo ka walwalsan barta xiriirka bulshada ee Tiktok – Gool FM
Kooxda Barcelona oo ka walwalsan barta xiriirka bulshada ee Tiktok
(Barcelona) 27 Maarso 2021. Jamaahiirta kubadda cagta ayaa intooda badan aad u doonaya inay daawadaan xiddigahooda kubadda cagta, laakiin arrintaasi waa mid ay dhibaato ku qabaan maalin waliba ciyaartoyda.
Shabakadda ESPN ayaa warinaya in Kooxda Barcelona ay walaac xooggan ka qabto barta xiriirka bulshada ee Tiktok, maadaama ay taageerayaal badan oo bartaasi isticmaala ay handadayaan ciyaartoydooda maalin waliba, waxaana ay adkeeyeen ammaanka garoomada tababarka.
Waxaa jirka muuqaallo dhowr ah oo dhex socda barta Tiktok oo taageerayaasha ay bartilmaameedsadeen Lionel Messi isagoo ka sii baxaya garoonka tababarka, waxaana ay isku dayeen inay aad ugu dhowaadaan kabtanka Barcelona, taasoo halis gelin karta ammaankiisa.
Sidoo kale xiddigaha kale ee kooxda Barcelona sida Antoine Griezmann, Pedri iyo Riqui Puig ayaa iyagana la bartilmaameedsaday, iyadoo Riqui Puig la handaday xilli ay jamaahiirtu ku qeyliynayeen in 21-sano jirkaan uu noday mid isla weyn tan iyo markii uu ka mid noqday kooxda koowaad.
Jamaahiirta qaarkood ayaa sidoo kale iska soo duubay muuqaallo Tiktok ah iyagoo aflagaadeynaya daafaca Barcelona ee Sameul Umtiti iyo laacibka khadka dhexe ee kooxdaas, Frenkie de Jong.
Waa kee Weeraryahanka ay dib u soo ceshanayso Kooxda Chelsea haddii ay ku guuldarreysato saxiixa Erling Haaland?
Ka hor kulammada ay la leeyihiin Kooxaha Liverpool iyo Barcelona, laacib muhiim u ah Real Madrid oo tababarka dib ugu soo laabtay